के म अष्ट्रेलियाको यात्रा गर्न सक्छु? - eNepal
के म अष्ट्रेलियाको यात्रा गर्न सक्छु?
by Manoj Poudyal २०७८, २२ पुष बिहीबार 304
विश्वव्यापी भ्याक्सिन रोलआउटको गति बढ्दै जाँदा विश्वका धेरै देशहरु सामान्य अवस्थामा फर्किरहेका छन्।अहिले धेरैको मनमा एउटै प्रश्न उब्जिनसक्छ। के हामी अष्ट्रेलिया जान सक्छौं? यसैको सेरोफेरोमा केही जानकारी दिने प्रयास हामी गर्दैछौ।
प्रधानमन्त्रीले अष्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नियमहरूमा ठूला परिवर्तनहरूको शृंखलाको घोषणा गर्नुभएको छ जसले हजारौं विदेशी आगमनहरू जस्तै काम गर्ने छुट्टी मनाउनेहरू सहित – डिसेम्बर २०२१ देखि प्रवेश गर्न अनुमति दिइएको छ।
डिसेम्बर देखि TGA (जस्तै AstraZeneca, Pfizer, Moderna र Johnson & Johnson) द्वारा मान्यता प्राप्त भ्याक्सिनका पूर्ण खोप लगाइएका सबै वैध भिसा धारकहरूलाई विशेष छुटको लागि आवेदन नगरी अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्न अनुमति दिइएको छ।
यसमा ब्याकप्याकरहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू र दक्ष कामदारहरू जस्ता काम गर्ने छुट्टी भिसा धारकहरू समावेश छन्। अस्ट्रेलियाले जापान र दक्षिण कोरियासँग पनि यात्रा बबल स्थापना गरेको छ। सिंगापुर र न्यूजील्याण्डसँग पहिले नै यात्रा बवल थियो।यात्रुहरूले आफ्नो उडानमा चढ्नु अघि पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ र पूर्ण खोपको प्रमाण देखाउनु पर्छ। २०२२ को शुरुवातमा सबै पर्यटकहरूका लागि सीमानाहरू पूर्ण रूपमा खोल्ने दिशामा यो ठूलो कदम हो!
अष्ट्रेलियामा प्रवेश गर्नको लागि तपाइँ माथि उल्लिखित मध्ये एक अस्ट्रेलीयन नागरिक, स्थायी बासिन्दा( पिआर )वा भिसा धारक हुन आवश्यक छ तर सामान्य पर्यटक भिसाहरू अहिलेको लागि निलम्बित छन्।
यदि तपाईं अष्ट्रेलियामा काम गर्ने बिदामा जान तयार हुनुहुन्छ भने, राम्रो खबर यो हो कि तपाईंले आफ्नो राहदानी कहाँको हो भन्ने आधारमा काम गर्ने छुट्टी भिसा (417) वा काम र छुट्टी भिसा (462) को लागि अब आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। भिसाको ब्याकलगको कारण, भिषा प्रोसेसीङ समय सामान्य भन्दा लामो छ त्यसैले धैर्य भने गर्नै पर्ने हुन्छ।
अष्ट्रेलिया जाने यात्रुहरूले प्रस्थान गर्नुभन्दा कम्तिमा ७२ घण्टा अघि अष्ट्रेलिया ट्राभल घोषणा (ATD) पूरा गर्नुपर्छ।
अष्ट्रेलिया यात्रा गर्नु अघि प्रस्थान गर्नु भन्दा ७२ घण्टा वा कम अघि लिइएको कोविड पीसीआर परीक्षणको प्रमाण देखाउनु पर्छ।
भिसा धारकको रूपमा अष्ट्रेलियाको यात्रा गर्न TGA (जस्तै AstraZeneca, Pfizer, Moderna र Johnson & Johnson) द्वारा मान्यता प्राप्त खोपको साथ Covid-19 विरुद्ध पूर्ण रूपमा भ्याक्सिक्स हुनु अनिवार्य हुन पर्नेछ भने नागरिक, बासिन्दा वा नजिकका परिवारका सदस्यहरूको लागि यात्रा बीमा आवश्यक छैन। यद्यपि, यो सबै आगन्तुकहरूको लागि सिफारिस गरिएको छ।
डिसेम्बर २०२१ देखि पूर्ण रूपमा खोप लगाइएका योग्य भिसा धारकहरूले यात्रा छुट बिना वा क्वारेन्टाइनको आवश्यकता बिना अष्ट्रेलिया जान सक्नेछन्। उनीहरू न्यू साउथ वेल्स वा भिक्टोरिया हुँदै प्रवेश गर्छन्।
खोप नलगाएकाहरूले अझै पनि आफ्नो आगमनको १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा तोकिएको ठाउँमा बस्नुपर्नेछ। यात्रुहरूले राज्य वा क्षेत्रको आधारमा क्वारेन्टाइनको लागत तिर्न आवश्यक हुन सक्छ।
बार, रेस्टुरेन्ट र पसलहरू जस्ता व्यवसायहरूमा प्रवेश गर्दा तपाईंको उपस्थिति रेकर्ड गर्न QR कोडको साथ जाँच गर्न अनिवार्य छ।
एयरपोर्ट र धेरैजसो सार्वजनिक यातायात सहित सबै उडानहरूमा मास्क लगाउनु पर्छ। मास्क लगाउने प्रतिबन्धहरू खुला व्यवसाय र पर्यटक आकर्षणहरू राज्यहरूमा फरक छन्।
प्रत्येक देशमा विदेशबाट आउने यात्रुहरूको लागि फरक प्रतिबन्धहरू छन्। तपाइँको अवस्था संग सान्दर्भिक जानकारीको लागी, स्थानीय सरकारका आधिकारीक वेभसाईट संग अद्यावधिक रहनुहोस्।
नोट: यो जानकारी सामान्य जानकारी मात्र हो र प्रतिबन्धहरू परिवर्तनको भइ रहेका हुन्छन् त्यसैले स्थानीय सरकारका वेभसाईट र अष्ट्रेलियाका अधिकारीहरूबाट आधिकारिक सल्लाह लिन अनुरोध गर्दछौ।